Unxiba njani eDubai | Iindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 09/09/2021 17:00 | Ukuhlaziywa ukuba 09/09/2021 18:14 | Iingcebiso, E-United Arab Emirates
Los E-United Arab Emirates Baliqela leemirates kwaye phakathi kwabo kukho Dubai. Okwethutyana ngoku, iye yathandwa ngokubalaseleyo kulwakhiwo lwayo oluchasa ukucinga kunye nokuba nesona sikhululo seenqwelomoya sikhulu nesimnandi emhlabeni, ngokunjalo ifumene ukhenketho oluninzi.
Kodwa i-Dubai yi ilizwe lamaSilamsiNjengokhenketho kunye nolwamanye amazwe njengoko kuye kwanjalo, ke zikhona iindlela ezithile zokunxiba ekufuneka azihloniphile. Namhlanje siza kudibana nabo, ke eli nqaku limalunga unxiba njani eDubai.
2 Unxiba njani eDubai
Njengoko benditshilo, i-emirate, ikomkhulu layo sisixeko esikwelo gama linye kunxweme lwePersian Gulf eyaziwayo nefumileyo. Isebe lolwandle lingena linqumle isixeko. Oku kufutshane nolwandle kukhokelele ekubeni abahlali bala mazwe bazinikezele kulimo kunye norhwebo lweeperile. Ngenxa yokuma kwayo, kwanangaphambi kokufunyanwa kweoyile, yayiyeyona ndawo inqwenelekayo yayisazi ukuba sezandleni zaseBritane kangangeminyaka engama-200.
Kwakunjalo kwii-60 xa i-emirate yafumanisa amasimi ayo atyebileyo eoyile Kwaye kwiminyaka elishumi kamva wajoyina nabanye babumba i-United Arab Emirates. Unjani urhulumente wakho wangoku? Yi ubukhosi bomgaqo-siseko. Ayinabemi abaninzi nanamhlanje ubuninzi babemi bayo ngabangaphandle, abantu abahlala apho kumashishini okanye abafuduki abasebenza kwicandelo lokwakha kunye nezinye iinkonzo.
I-Dubai ayinayo ioyile eninzi njengabamelwane bayo, ewe ewe okanye ewe ithathela ingqalelo ukwahluka kwimisebenzi yezoqoqosho, kungoko ityale imali eninzi ekukhuthazeni ukhenketho.
Sibuyele ekuqaleni: yimikhosi yamaSilamsi kunjalo abo banobunzima ngakumbi ngabafazi basentshona oqhele ukunxiba iimpahla ezintle nezikhanyayo kwiindawo ezishushu kakhulu.
Kuyinyani ukuba akukho mazwe mabini amaSilamsi afanayo kwaye ngamanye amaxesha kwenye okanye kwenye imigaqo iyalaxeka ngakumbi kubantu bamanye amazwe. Ngokomgaqo, ude ubone ukuba unjani umthetho, kuyacetyiswa ukuba uzilungiselele ukugubungela iingalo kunye nemilenze kunye nentloko yakho, kwiindawo ezithile. Oko kukuthi, nxiba imikhono emide, iibhulukhwe ezinde kunye itshefu ebanzi ihlala ikho.
Ngoku, isixeko saseDubai sisixeko sanamhlanje kwaye asivali kangako ngokwempahla, kuba baninzi abantu bamanye amazwe. Ke, uya kubona zonke iintlobo zeempahla, ukusuka kwiifutshane ukuya kwi-burkas epheleleyo. Ke, kwiihotele, kwiivenkile zokutyela nakumaziko okuthenga, iindawo apho kunokwenzeka ukudibana nabantu balapha kunye nabaphambukeli ngokufanayo, kufanelekile yiba nembeko kwaye uvale amaqatha kunye namagxa.
Ukuba awunanjongo yokulandela intetho yakudala "Apho uyakhona yenza into oyibonayo" Ezi ziindawo apho uya kuba nengxaki encinci. Ingakumbi ukuba uya kuhambo ngaphandle kweRamadan. Ukuba uthatha isigqibo sokuya kwisidlo sangokuhlwa kwindawo entle ngakumbi, kuya kufuneka unxibe iimpahla ngelo xesha lemeko.
Nolwandle? Emva koko Iimpahla zaselwandle zinxitywa elunxwemeni kuphela. Apha awunakukwenza into umntu aqhele ukuyenza kwiindawo ezinonxweme, ukunxiba isuti yokuhlamba imini yonke okanye ukuhlala eflopsini imini yonke. Ngoku elunxwemeni unxiba isuti enye yokuqubha, ibikini... elunxwemeni nakumachibi okudada nakwiipaki zamanzi. Kucacile, akukho ubunqunu okanye iintambo.
Kodwa kwezi ndawoOko kukuthi, ukuba uhamba uhambo ukuya kwisithili esidala e-Dubai, ukuba undwendwela iimarike zesiko okanye i-mosque ngoko kufuneka ulumke. Kwaye kukuba kwangoko awuyi kuziva kwilizwe lakho kodwa uphesheya. Abantu bendawo namasiko abo aza kukungqonga kwakamsinya ngoko ke kufuneka ubekekile. Ukuba ufuna ukunqanda ukujonga okanye ukuphawula, ngokuqinisekileyo ongakuqondiyo kodwa baya kwenza okufanayo, ulumke ngcono.
Kwimeko yokuhamba Ukutyelela i-mosque, abanye bavumela ukutyelelwa ngabantu abangengomaSilamsi, amadoda nabafazi mabahambe begqunywe imilenze neengalo. Abanye baneempahla ezongezelelweyo, ukuba awuzange uphume ehotele unxibe ngoluhlobo.
Ngoku enye indawo edumileyo eDubai entlango. Zininzi ukhenketho entlango kwaye kungcono ukuba wenze ezinye kuba zilungile. Kwimeko apho kusoloko kucetyiswa ukunxiba iibhulukhwe, iibhulukhwe ezimfutshane okanye capri iblukhwe (Kananjalo ezo unokuzikhupha kwisiqingatha somlenze), kunye nomphezulu wemisipha, ihempe okanye ihempe. Ewe kunjalo, i-sunscreen kunye nomnqwazi.
Emini intlango ishushu kakhulu kwaye unxibe iimpahla ezikugubungela kakhulu lolona khetho lufanelekileyo ungatshiswa. Kungabanda, kuxhomekeke kwixesha lonyaka, kusenokwenzeka nokuba uhambe ebusuku, kuyacetyiswa ukuba uze vala izihlangu.
Ukuba abafazi abanakho ukubonisa isifuba, iingalo namathanga, amadoda awakwazi kuhamba enganxibanga esifubeni, okanye ezimfutshane kakhulu okanye isuti yokuqubha elinganisa enye. Akukho zinxibo zincinci, ezimfutshane ezimfutshane, iintloko, izinto ezibonisa ngaphaya, akukho nto ithi tu yangaphantsi. Kwaye ngaphezu kwako konke, musa ukuba nomsindo ukuba zitsala umdla wethu.
Iyintoni inqaku lokuxoxa malunga nendlela yokunxiba okanye isimilo senkcubeko engeyiyo eyethu? Asizukutshintsha kwanto kwaye siyadlula, ke ukuba ngempazamo sikhubekisa umntu kwaye asitsalele ingqalelo, kufuneka sixolise. Akukho mntu ufuna ukubandakanya amapolisa, ke kwanele ukuba nesimo sengqondo esifanelekileyo.
Ke, ukushwankathela ezona ngongoma zisisiseko zendlela onxiba ngayo eDubai: Kwezona ndawo zidumileyo zoluntu, abasetyhini akufuneki bagqume iintloko, ewe kwii-mosque, kufuneka bagqume amagxa abo ukuya kuthi ga emadolweni, kungabikho zincinci, izikipa kufuneka babe nemikhono emifutshane, ewe unganxiba i-bikini, ijini , Nangona akukho nto ityhila kakhulu. Ewe ebusuku, kodwa uhlala unesiphatho ngesandla ukugubungela oko sikuvezayo. Kwiindawo zemveli ezininzi okukhona sihamba sigqunyiwe, kokukhona kungcono, kuyafana ukuba siya kwisakhiwo sikarhulumente.
Kwaye amadoda? Banokulula, kodwa kufanelekile ukwazi izinto ezimbalwa: bangahamba ngeebhulukhwe ezimfutshane ezingamfutshane kakhulu, nangona ingaqhelekanga, kwaye ewe kumele ukuba bayonqena, akukho bhayisekile, iimpahla zemidlalo ukuba wenza ezemidlalo, ukuba akunjalo, ukuba uya kwimosque kufuneka unxibe ibhulukhwe ende ...
Ngaba ikhona into eyenzekayo ukuba andiyihloniphi enye yale nto? Ungaya ekufumaneni ezinye Amagqabantshintshi, uhamba nge kujongeka kakubi kude kube ujongene ne Ipolisa kunye intolongo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Uhambo » Iingcebiso » Unxiba njani eDubai
Yintoni ongayibona kwiPicos de Europa